အရမ်းကိုဆုတောင်းပြည့်လွန်းလို့ မင်းညီမင်းသားတွေမဖူးရဟုအမိန့်ထုတ်ထားရတဲ့ ရုပ်ပွားတော်မြတ် သမိုင်းကြောင် – Barnyar Barnyar
အရမ်းကိုဆုတောင်းပြည့်လွန်းလို့ မင်းညီမင်းသားတွေမဖူးရဟုအမိန့်ထုတ်ထားရတဲ့ ရုပ်ပွားတော်မြတ် သမိုင်းကြောင်
အရမ်းကိုဆုတောင်းပြည့်လွန်း လို့ မင်းညီမင်းသားတွေမဖူးရ ဟု အမိန့်ထုတ်ထားရ တဲ့ ရုပ်ပွားတော်မြတ် အကြောင်း….
စစ်ကိုင်းတောင် တစ်ဖက်ကမ်းကရွှေကြက်ယက် ရွှေကြက်ကျဘုရားတွေဖြစ်ပြီး ဒီဆုတောင်းပြည့်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ ရွှေကြက်ယက်စေတီအတွင်းမှာ ရှိပါတယ် ။အနော်ရထာမင်းကြီးလက်ထက်မှာ တစ်ကြိမ်…၊ နရပတိစည်သူမင်းကြီးလက်ထက်မှာ တစ်ကြိမ်… မည်သည့်မင်းညီမင်းသားမှ မဖူးရလို့အမိန့်တော်ထုတ်ပြန်ပြီး အစာင့်တွေချထားကာ သော့ခတ်ထားခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ ရုပ်ပွားတော်မြတ်ရှေ့ကို တနေ့ကရောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားကိုဖူးတွေ့လိုက်တာနဲ့ .. အို … သပ္ပါယ်လိုက်တာ လို့ ပါးစပ်က ရောင်ရမ်းပီး ထွက်သွားမိတဲ့ အထိပါပဲ …။တကယ့်ကို ရင်ထဲမှာ အေးချမ်းသွားအောင် သပ္ပါယ်လိုက်တာ … ။စပါယ်နဲ့ ဇွန်းပန်းတွေကို ရင်ဘတ်တော်မှာ ပူဇော်ထားတာကလည်းမွေးကြိုင်နေတာပါပဲ ။ရွှေသင်္ကန်းကပ်ပြီး ဆုတောင်းခဲ့မိတာလေးဟာတစ်ကယ်ပြည့်ဝခဲ့တာမို့ သူငယ်ချင်းတွေကို မျှဝေပေးချင်မိခဲ့ပါတယ်။ဆုတောင်း ပြည့်ဝလွန်းတယ်ဆိုတဲ့ဇတ်ကြောင်းလေးကိုဖတ်မိရင် ပိုပြီးလေးနက်စေမှာမို့ ဇတ်လမ်းလေးကိုအတိုချုပ်လို့ ရေးပါရစေ။
ပုဂံနေပြည်တော်မှာ မင်းယဉ်နရသိင်္ခ ဘုရင် အုပ်စိုးချိန်မှာ အိမ်ရှေ့စံညီတော်ကတော့ နရပတိစည်သူ ဖြစ်ပါတယ်။နောင်တော်ဘုရင်ဟာညီတော်အိမ်ရှေ့မင်းရဲ့ မိဘုရားဖြစ်တဲ့ ဝေဠုဝတီကို တပ်မက်စွဲလန်းမိတာကြောင့် ညီတော်ကို လိမ်လည်ပြီး ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကို စစ်တိုက်ဖို့ လွှတ်လိုက်ပါတယ် …။ထုံးစံအတိုင်း ‘ ငဆောင်ချမ်း ‘အရပ်ပေါ့ ။အဲဒီကာလတုန်းက နေပြည်တော်ရဲ့စစ်မျက်နှာဟာ တရုတ်တွေနဲ့ပဲ ရှိခဲ့တာမို့ တရုတ်တွေရဲ့ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာဟာ ဗန်းမော်မြို့အနီးမှာ ရှိတဲ့ ရှေ့တန်းစခန်း ငဆောင်ချမ်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်
ညီတော် နရပတိစည်သူ စစ်ထွက်သွားတဲ့ အချိန်မှာ ဘုရင် မင်းယဉ်နရသိင်္ခဟာ ညီတော်ရဲ့ မိဘုရားဝေဠုဝတီကို သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ် ။ဝေဠုဝတီဆိုတာ .. ဝါးထဲကရတဲ့သံသေဒဇ မိန်းကလေးဖြစ်တာမို့ လှပချောမောလွန်းတယ်လို့ ဖတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။
အရမ်းကို ဆုတောင်းပြည့်လွန်းလို့ မင်းညီ မင်းသားတွေ မဖူးရဟု အမိန့်ထုတ်ထားရတဲ့ရုပ်ပွားတော်မြတ် အေကြာင်း
နေပြည်တော်မှာ အကြောင်းထူးရင် လိုက်ခဲ့ဖို့ မှာထားခဲ့တဲ့ အိမ်ရှေ့စံရဲ့တပည့် မြင်းတော်ခံငပြည့်ဟာ ချက်ချင်းလိုက်လာခဲ့ပေမယ့် ဗန်းမော်မြို့အနီးက ငါးပတ်ချောင်းကို ရောက်တဲ့အချိန် ပင်ပန်းလွန်းလို့စခန်းချပြီးအိပ်စက်ခဲ့မိပါတယ် ။ငပတ်ချောင်းရဲ့ တဖက်ကမ်းမှာ သူ့ရဲ့ သခင်စစ်တပ်ကြီး စခန်းချနေခဲ့တာကို မသိခဲ့ရှာဘူးပေါ့ ။ ဒါဟာ ကြမ္မာငင်တယ်လို့ ပြောရမယ် ထင်ပါရဲ့ ။
ငပြည့်စီးတဲ့ မြင်းဟာ အိမ်ရှေ့စံနရပတိစည်သူရဲ့ မြင်းဖြစ်တာမို့ ချောင်းတစ်ဖက်ကမ်းက သူ့သခင်ရဲ့ အနံ့ရတဲ့ မြင်းတော်ကတော့တစ်ညလုံး ဟီနေတော့တာပေါ့ ..။အိမ်ရှေ့မင်း နရပတိစည်သူဟာ သူ့မြင်းဟီသံကြောင့် အကြောင်းထူးပြီဆိုတာ သိပြီး တစ်ညလုံး အိပ်လို့ မပျော်နိုင်ခဲ့ပါဘူး …။ ဘယ်အချိန်ရောက်လာနိုး မျှော်ကိုးခဲ့ပေမယ့်မြင်းတော်ခံ ငပြည့်ကတော့ မနက်မိုးလင်းမှ ရောက်လာခဲ့ပြီး မိဖုရားကို ဘုရင်သိမ်းပိုက်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း လျှောက်တင်ပါတော့တယ် ။နရပတိစည်သူရဲ့ ဒေါသဟာငယ်ထိပ်အထိ တတ်သွားခဲ့ပါတယ် ..။
ငါတို့ မင်းဟူသည် .. တစ်ညတာအချိန်ဆိုတာ အကြံအားလုံး ပြီးမြောက်နိုင်ကြောင်း .. ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စကို ချက်ချင်းလာရောက်ပြီး မလျှောက်တင်ရကောင်းလား ‘ လို့ အမျက်တော်ရှပြီး မြင်းတော်ခံငပြည့်ကို ကွပ်မျက်လိုက်ပါတယ် ။ နောက်ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းအတိုင်း စုံဆင်းခဲ့ပါတယ် ။
ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနဘေးမှာတည်ရှိတဲ့ ဒီဘုရားစေတီကို ရောက်လာတဲ့အခါ ခဏနားလို့ ဘုရားစောင်းတန်းအတိုင်းတတ်လာပြီးဆုတောင်းပြည့်ဘုရားဆင်းတုတော်မြတ်ကို ဖူးမျှော်ကြည်ညိုပါတယ်။ပါလာတဲ့ ပုဝါဖြူကို ကပ်လှူပူဇော်ပြီး သစ္စာအဓိဌာန် ပြုပါတော့တယ် ။
‘ တပည့်တော်သည် သစ္စာမတည် သည့် နောင်တော်ဘုရင်မင်းမြတ်ကို အပြီးတိုင် လုပ်ကြံ၍ အောင်မြင်ခဲ့ မည် ဆိုပါလျှင် ဤပုဝါစကို ဘုရားရှင်မှ ကိုယ်တော်လျ၍ ခံယူတော်မူ ပါစေသတည်း။
အိမ်ရှေ့စံရဲ့ ပုဝါဖြူစဟာ လေမှာဝဲပျံပြီး ဘုရားရှင်ထံ လွင့် မျောသွားခဲ့ပြီး ထူးခြားစွာ ဘုရား ရှင်ရဲ့ လက်တော်ပေါ်ကို ရောက်ရှိ ခံယူတော်မူခဲ့ပါတယ် ။နရပတိစည်သူဟာ သစ္စာဓိဌာန်ပြုခဲ့ရာမှာ အောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့် ဝမ်းသာအားရစွာနဲ့ ချီတတ်လာခဲ့ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ငယ်ကျွန်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့အောင်စွာငယ်ကို တိတ်တဆိတ်လွှတ်လို့ လုပ်ကြံစေရာမှာ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ဘုရင်မင်းယဉ်နရသိင်္ခ ကျဆုံးလို့ နရပတိစည်သူ မင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။သစ္စာအဓိဌာန်အောင်မြင်ပြီး ဆုတောင်းပြည့်လွန်းတဲ့ ဆုတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားဆင်းတုတော်ကြောင့် ဘုရင်နရပတိစည်သူဟာတက် မအေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့ ။
ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် နန်းတွင်းက မင်းညီမင်းသားတွေဟာလည်းသူလိုဆုတောင်းပြီး နန်းလုမှာကိုပူပန်သောက ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ ဖတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမတ်ကြီးတွေနဲ့ တိုင်ပင်တဲ့အခါမှာ အရင်ဘိုးဘေးတွေဖြစ်တဲ့ အနော်ရထာမင်းကြီးလက်ထက်မှာလည်း အခုလိုဆုတောင်းပြည့်လွန်းတာကြောင့်မင်းညီမင်းသားတွေ ဖူးမျှော်ခွင့်ပိတ်ပြီး အစောင့်ချထားဖူးပါကြောင်း …ပုဂံမင်းလက်ထက်မှာလည်း ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ပြီး မြန်မာမင်းအဆက်ဆက်တို့လက်ထက်မှာလည်း မင်းညီမင်းသားအားလုံး ဆုမတောင်းရ၊မဖူးမျှော်ရလို့ တင်းကြပ်စွာ တားမြစ်ထားခဲ့ရတဲ့အထိ ဆုတောင်းပြည့်လွန်းလှတဲ့ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားအစစ်တစ်ဆူ ဖြစ်ကြောင်း လျှောက်တင်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် နရပတိစည်သူလက်ထက်မှာလည်း ဒီဆုတောင်းပြည့်ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးကို မင်းညီမင်းသားများ မဖူးမျှော်ရဆိုတဲ့ အမိန့်တစ်ရပ် ချမှတ်လို့ စောင့်ရှောက်ခဲ့ရတယ်လို့ မှတ်သားခဲ့ရပါတယ် ။ရွှေတိဂုံဘုရား အထက်ပစ္စယံမှာရှိတဲ့ ပတ္တမြားမျက်ရှင် ရုပ်ပွားတော်လို တန်ခိုးကြီးဆင်းတုတော်တွေဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် …။
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က အမေနဲ့မန္တလေးကို ဈေးဝယ်လိုက်တိုင်း …ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းတတ်ရင်း ..ကျောင်းပိတ်လို့ အိမ်ပြန်ချိန် …ဧရာမြစ်ပြင်ကို ကားနဲ့ ဖြတ်တိုင်း..စစ်ကိုင်းတံတားကြီးပေါ်ကလှမ်းမြင်ရတဲ့ဒီဘုရားစေတီကို အဝေးကနေပြီးဖူးမျှော်ကြည်ညိုခဲ့ မိပါတယ် .. ။
ဒါဆိုရင် … သမိုင်းစိတ်ဝင်စားသူတွေအနေနဲ့ မင်းဝံတောင်တစ်ဖက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ ဧရာမြစ်ဘေးက ဘယ်ဘုရားစေတီလည်းဆိုတာ သိကြမယ် ထင်ပါတယ်
မန္တလေးတိုင်း အမရပူရမြို့မှ ဆုတောင်းပြည့်လွန်းလို့ အစောင့် အရှောက်နဲ့ ထားရတဲ့ ဆုတောင်း ပြည့်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ရှိတဲ့ ရွှေကြက်ယက်၊ရွှေကြက်ကျဘုရား များ နဲ့ လွမ်းမောဘွယ် … မြင်းတော်ခံငပြည့် ၊ အောင်စွာငယ် တို့ရဲ့ လွမ်းစေတီတွေ (ဒုတိယပိုင်း)
အချိန်ကာလဆိုတာ .. နောင်တ တရားများစွာကို မွေးဖွားပေးတတ် သလို သံဝေဂတရားတွေကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ ဆိုစကား ရှိခဲ့ပါတယ် … ။နောင်တဆိုတာမျိုးက လည်း လွန်မှပဲ ရကြတာမျိုးလေ …။
နရပတိစည်သူဟာ ဘယ်လိုမှ ပြု ပြင်လို့ မရနိုင်တဲ့ အမှားတွေကို မင်း ပျိုမင်းလွင်ဘဝ၊အိမ်ရှေ့စံဘဝမှာပဲကျူးလွန်ခဲ့မိပါတယ် ။သစ္စာရှိတဲ့ ကျွန်ယုံတော် ငပြည့်ကို ဒေါသမထိမ်းနိုင်ပဲ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက်နဲ့ အမျက်မာန်စောင်ကြီးစွာ ကွပ်မျက်ခဲ့တယ်။ဒါတင်မကပဲ မိမိအထွတ်အထိပ်ရောက်ဖို့အတွက် အကိုတော် မင်းယဉ်နရသိင်္ခကို လုပ်ကြံပေးခဲ့တဲ့အောင်စွာငယ်ကိုလည်း နန်းရင်ပြင်ညီလာခံမှာ မထေမဲ့မြင်ပြုသည်ဆိုပြီး ကွပ်မျက်ခဲ့ပြန်ပါတယ် … ။
ငယ်ကျွန် အောင်စွာငယ်ကို ကွပ်မျက်ခဲ့တာကလည်း မိန်းမတစ် ယောက်အတွက်ပါပဲ ။ ဖြစ်စဉ်လေးကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် …အိမ်ရှေ့မင်း နရပတိစည်သူဟာ သူ့ရဲ့ မိဖုရားဝေဠုဝတီကို အကိုတော်
ဘုရင် မင်းယဉ်နရသိင်္ခက သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အတွက် နာကျည်းစွာနဲ့ ကျွန်ယုံ လက်ရုံးတပည့် အောင်စွာငယ်ကို လုပ်ကြံခိုင်းတယ်။ အရေးတော်ပုံ အောင်ခဲ့ရင် ဘုရင့်မိဖုရားသုံးပါး( မရီး ၃ ယောက်) ထဲက မင်း နှစ်သက်တဲ့တစ်ပါးနဲ့ ငါကိုယ်တိုင်လက်ဆက်ပေးပြီး သူကောင်းပြုမယ်လို့လည်း ကတိပေးခဲ့တယ် ။
တကယ်အရေးတော်ပုံ အောင်မြင်တဲ့အခါမှာတော့ နရပတိစည်သူ ဟာမရီးတော်တွေရဲ့ ချေသလုံးဖက်ငိုယိုတောင်းပန်မှုကြောင့် သနားငဲ့ ညှာပြီး အောင်စွာငယ်ကိုပေးထား တဲ့ကတိဖျက်လိုက်ပါတော့တယ်… ။ဟဲ့ အောင်စွာငယ် … ငါမင်းကို ခိုင်းစေခဲ့စဉ်က ကတိပေးခဲ့ပေမယ့်အခုတော့ ငါ့မှာ အခက်တွေ့နေရတယ်၊ နင့်ကို ငါ့ရဲ့ မရီးတော်တစ်ပါး ပါးနဲ့ လက်ဆက်ပေးချင်ပေမယ့် အဲဒီလို လုပ်လိုက်ရင် ငါ့ရဲ့ ဘိုးဘေ တွေကို ပစ်မှားသလို ဖြစ်မှာစိုးတဲ့အ တွက် နင့်ကို တစ်ခြားအမျိုးကောင်း သမီးတစ်ဦးနဲ့ လက်ဆက်ပေးပြီး သူကောင်းပြုပေးပါ့မယ် ‘ လို ဘုရင် ကိုယ်တိုင် ချော့မော့ပြောဆိုခဲ့ပေမယ့် … အောင်စွာငယ်ကတော့ မကြေနပ်ခဲ့ပါဘူး ။ ‘ကတိမတည်တဲ့ ဘုရင်ပဲ . ထွီ ‘ ဆိုပြီးတံတွေးထွေးလို့ ထွက်သွားခဲ့တာကြောင့် နရပတိစည်သူဟာ ဒေါသဖြစ်ပြီး ညီလာခံ မှာ မထေမဲ့မြင်ပြုတဲ့အတွက် မင်းမျက်သင့်လို့ ကွပ်မျက်ခဲ့ပါတယ် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ငပြည့်နဲ့ အောင်စွာငယ်ကို ကွပ်မျက်ခြင်းဟာ ကျေးဇူးမဲ့လွန်းရာ ရောက်ခဲ့တာမို့ နရပတိစည်သူဟာ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကြီးစွာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ။ တပည့်တွေ အတွက် ကုသိုလ် ကောင်းမှု ပြုပေးဖို့ သူဘုရင်ဖြစ်ချိန်မှာ စဉ်းစားဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါ တယ်…။ အရေးတော်ပုံကာလက သူအဓိဌာန် ပြုခဲ့တဲ့ ရွှေကြက်ယက် ရွှေကြက်ကျ ဘုရားဆီကို ရေတ
ပ် အင်အား အပြည့်အဝနဲ့ ပြန်လာခဲ့ ပါတယ်။သက္ကရာဇ် ၅၄၇ခုနှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုတောင်းပြည့်ကိုယ်တော်မြတ်ထံ သူဆုတောင်းခဲ့တာက သက္ကရာဇ် ၅၃၆ ခုနှစ်ဖြစ်တာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်ပြီး ၁၁ နှစ်ကြာမှပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ထီးတော်တင်ဖို့နဲ့ တပည့်တွေအတွက် ဘုရားတည်ပေးဖို့ ပြန်လာခဲ့တာပါ ။ ရွှေကြက်ယက်၊ရွှေကြက်ကျ ဘုရားတွေဟာ သီရိဓမ္မာသောက မင်းကြီး တည်ထားခဲ့တဲ့ ဗျာဒိတ်ရဘုရားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားရှင် ကြက်မင်းဘဝက မိဖုရား ယသော်ဓယာအလောင်း နဲ့အတူနေထိုင်ကျက်စားခဲ့တဲ့ တောင်တော် နှစ်ဆူပေါ်မှာ တည်ထားခဲ့တာပါ ။မန္ဓာဂီရိတောင်တော်ပေါ်မှာ ရွှေကြက်ယက်ဘုရားတည်ခဲ့ပြီး ၊နင်္ဂါးရစ်တောင်တော်ပေါ်မှာ
ရွှေကြက်ကျဘုရားတည်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့ သရီယဓါတ်တော်တွေကို ဌာပနာပြီး တည်ခဲ့တာမို့ ခုချိန်ထိ တန်ခိုးကြီးလှတဲ့ ဘုရားညီနောင်အဖြစ်တည်ရှိနေခဲ့ပါတယ် … ။အမရပူရ မှာ တည်ရှိပြီး ဧရာမြစ်ကမ်းဘေးမှာ တည်ရှိပါတယ်။
ဆုတောင်းပြည့်လွန်းတဲ့ ဆင်းတု တော်မြတ်ဟာ ရွှေကြက်ယက် ဘုရားအတွင်းမှာ တည်ရှိပါတယ် ။အိမ်ရှေ့မင်းဘဝက အဓိဌာန်ပြု ဆု တောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်း အရိ မဒ္ဒနာပူရ ပုဂံနေပြည်တော်မှာ မင်းဧကရာဇ်ဖြစ်မည်ဆိုပါက ဤပုဝါစကို ဘုရားရှင်မှ ကိုယ်တော်လျ၍ ခံယူတော်မူပါစေသတည်းလို့ ဆုတောင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။အကိုမင်းယဉ်နရသိင်္ခကို သတ်ဖို့ဆုတောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး ။ပထမအပိုင်းမှာ စာရေးတာ လိုအပ်ချက်ရှိသွားတဲ့အတွက် လူသတ်ဖို့ ဘုရားက ခွင့်ပြုသလို ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ )တပည့်တွေအပေါ် တင်ရှိခဲ့တဲ့နောင်တ တရားတွေနဲ့အတူ ရွှေကြက်ယက် ရွှေကြက်ကျ ဘုရားနှစ်ဆူကို ပြုပြင်ပြီး ထီးတော်အသစ်တင်လှူဖို့ လာခဲ့တဲ့ နရပတိစည်သူရဲ့ ဖောင်တော်ဟာ ရွှေကြက်ကျဘုရားရောက်ခါနီးမှာပဲ အတိတ်ဘဝက ရန်ငြိုးရှိခဲ့တဲ့မိချောင်းကြီး ရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုခံရပါတော့တယ် ။နတ်မိချောင်းကြီးဟာ နရပတိစည်သူရဲ့ ဖောင်တော်ကို အောက်ကနေထမ်းထားတဲ့အတွက် ဖောင်တော်ရပ်သွားပြီး တစ်ဖက်စောင်းသွားခဲ့ပါတယ် ။ ဖောင်တော်တိမ်းမှောက်တော့မယ့် အခြေအနေမှာ ဖောင်တော်ပေါ်မှာ ပါလာတဲ့ မွန်သူရဲကောင်း ရမန်ငထွေးဟာ ဘုရင့်သံလျက်တော်ကို တောင်းလို့ ရေအောက်မှာ မိချောင်းကြီးနဲ့ သတ်ပုတ်လို့ အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။ မင်းကြီးလည်း မွန်သူရဲကောင်း ရမန်ငထွေးကို အားရကြေနပ်တော်မူလို့ ဆုတော်များစွာပေးတဲ့ အပြင် အနန္တသူရိယဘွဲ့ ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့ မှတ်သားခဲ့ရဖူးပါတယ်။ငယ်ငယ်တုန်းက စစ်ကိုင်းတံတားကြီးပေါ်က ဖြတ်ပြီး ရွှေကြက်ကျဘုရားကို အဝေးကဖူးမျှော်ကြည်ညိုမိတိုင်း ရမန်ငထွေးကို အားကျစိတ်နဲ့ သတိယမိပါတယ် ။
နရပတိစည်သူဟာ ရွှေကြက်ယက် ရွှေကြက်ကျ ဘုရားနှစ်ဆူကိုပြုပြင်ပြီး ထီးတော်အသစ်တင်လှူခဲ့ပါတယ် ။ရွှေကြက်ယက်ဘုရားရဲ့အောက်အဆင့်ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာတဝဂူ ကြာခံဘုရားတစ်ဆူ တည်ထားခဲ့သလို မြင်းတော်ခံငပြည့်အတွက် ဘုရားတစ်ဆူ ၊ အောင်စွာငယ်အတွက်ဘုရားတစ်ဆူ တည်ပြီးကုသိုလ်ပြုလို့ အမျှပေးဝေခဲ့ပါတယ် …။( ဘုရားပုံတစ်ခုချင်းစီမှာ စာရေးပေးထားပါတယ်)ရွှေကြက်ယက်ဘုရားခြေရင်းမှာ မြင်းတော်ခံငပြည့်အတွက် နတ်နန်းတစ်ခုကိုလည်း တည်ဆောက်ပေးခဲ့ပါတယ် လက်ရှိမှာလည်း နတ်နန်းဟာ မူလအတိုင်းတည်ရှိနေပါသေးတယ်။
ဘုရားတွေ ထီးတင်ပွဲမှာ နရပတိစည်သူဟာ သူ့ငယ်ကျွန်အရင်းတွေကို သတိယ တမ်းတလွန်းလို့ မအိပ်မစား ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာရယ် …ဒီအချိန်မှာ သူ့ငယ်ကျွန်တွေရှိရင်အရမ်းဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်ကြပေလိမ့်မယ်လို့ တဖွဖွ ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ ဖတ်မှတ်ခဲ့ရပါတယ်။ တခါတရံမှာ သတိထားရမှာက ဆရာ တပည့် သိပ်ရင်းနှီးတဲ့အခါ တပည့်ဆိုတာဆရာအရင်းကို စိတ်ကောက်တာနွဲ့ဆိုး ဆိုးတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ် ဒါကို နားလည်မှု မပေးရင် ဆရာကို မခန့်လေးစားလုပ်တယ်လို့ နားလည်မှုတွေ လွဲမှားတတ်ကြပါတယ် ဘဝနဲ့ရင်းရတဲ့ ဆင်ခြင်စရာတွေကိုသမိုင်းတွေက လက်ဆင့်ကမ်း ပေးထားခဲ့ပါပြီ … ။မြင်းတော်ခံငပြည့်ကို ကွပ်မျက်ခဲ့စဉ်တုန်းအခါကလည်း … စိတ်မကောင်းစရာ အဖြစ်အပျက်ကလေးတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်… ။
နရပတိစည်သူရဲ့ ဖောင်တော်ဟာဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစုန်ဆင်းလာရင်း စစ်ကိုင်းရွာသစ်ကြီးနဲ့ငါန်းဇွန်အနား ရောက်တဲ့အခါ ဖောင်တော် ရပ်သွားခဲ့ပါတယ် ။ မြင်းတော်ခံငပြည့်ရဲ့အလောင်းဟာဖောင်တော်နဲ့ ကပ်ပါလာတာကိုထူးဆန်းစွာ တွေရှိလိုက်ရတယ်လို့ ဖတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ် … ။နရပတိစည်သူဟာ စိတ်မကောင်း ကြီးစွာ ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ‘ မင်းတာဝန်ကြေပါတယ် ၊နေရစ်ပါတော့ ငပြည့်ရယ်’လို့ ပြောဆိုလို့အနီးက သဲသောင်ပြင်မှာ ဖောင်တော်ကပ်လို့ ကောင်းစွာမီးသဂြိုလ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။သူ့တပည့်ကို ချီးမြှောက်တဲ့ အနေနဲ့သဲသောင်ပြင်ကို အပိုင်စား ပေးခဲ့ပါတယ်။ ရွှေပြည့်ရှင် ကျွန်းပိုင်နတ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့ ဖတ်ခဲ့ရပြီးဒေသခံများ ကိုးကွယ်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ် ။သမိုင်းဆိုတာ သေဆုံးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ လူတွေ… မြို့ရွာတွေအကြောင်း သင်ကြားလေ့လာရတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်သလို လူတွေ ဒေသတွေ တိမ်ကောပပျောက်သွားကြပေမယ့် မပပျောက်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေကြောင့် ယခုလူ့ဘောင်လောကကြီးဆက်လက် ရှင်သန်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ သမိုင်းဆရာမကြီးရဲ့စကားလေးကို သဘောကျမိပါတယ် ။အတိတ်မရှိခဲ့ရင် ပစ္စုပ္ပန်ဆိုတာမရှိနိုင်သလို ပစ္စုပ္ပန်မရှိရင် အနာဂတ်လည်း ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။အတိတ်ကို သင်္ခန်းစာယူနိုင်ပြီး အနာဂတ် လှပအောင်ဖန်တည်းဖော်ဆောင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါရစေ ။ စာဖတ်သူများ အားလုံးဒေါသ မာန်မာနကြောင့် ရတဲ့ နောင်တ တရားတွေ ကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ။
အရမျးကိုဆုတောငျးပွညျ့လှနျးလို့ မငျးညီမငျးသားတှမေဖူးရဟုအမိနျ့ထုတျထားရတဲ့ ရုပျပှားတျောမွတျ သမိုငျးကွောငျး
အရမျးကိုဆုတောငျးပွညျ့လှနျး လို့ မငျးညီမငျးသားတှမေဖူးရ ဟု အမိနျ့ထုတျထားရ တဲ့ ရုပျပှားတျောမွတျ အကွောငျး….
စဈကိုငျးတောငျ တဈဖကျကမျးကရှကွေကျယကျ ရှကွေကျကဘြုရားတှဖွေဈပွီး ဒီဆုတောငျးပွညျ့ကိုယျတျောမွတျကွီးကတော့ ရှကွေကျယကျစတေီအတှငျးမှာ ရှိပါတယျ ။အနျောရထာမငျးကွီးလကျထကျမှာ တဈကွိမျ…၊ နရပတိစညျသူမငျးကွီးလကျထကျမှာ တဈကွိမျ… မညျသညျ့မငျးညီမငျးသားမှ မဖူးရလို့အမိနျ့တျောထုတျပွနျပွီး အစာငျ့တှခေထြားကာ သော့ခတျထားခဲ့ရတယျ ဆိုတဲ့ ရုပျပှားတျောမွတျရှကေို့ တနကေ့ရောကျခဲ့တယျ။ဘုရားကိုဖူးတှလေို့ကျတာနဲ့ .. အို … သပ်ပါယျလိုကျတာ လို့ ပါးစပျက ရောငျရမျးပီး ထှကျသှားမိတဲ့ အထိပါပဲ …။တကယျ့ကို ရငျထဲမှာ အေးခမျြးသှားအောငျ သပ်ပါယျလိုကျတာ … ။စပါယျနဲ့ ဇှနျးပနျးတှကေို ရငျဘတျတျောမှာ ပူဇျောထားတာကလညျးမှေးကွိုငျနတောပါပဲ ။ရှသေင်ျကနျးကပျပွီး ဆုတောငျးခဲ့မိတာလေးဟာတဈကယျပွညျ့ဝခဲ့တာမို့ သူငယျခငျြးတှကေို မြှဝပေေးခငျြမိခဲ့ပါတယျ။ဆုတောငျး ပွညျ့ဝလှနျးတယျဆိုတဲ့ဇတျကွောငျးလေးကိုဖတျမိရငျ ပိုပွီးလေးနကျစမှောမို့ ဇတျလမျးလေးကိုအတိုခြုပျလို့ ရေးပါရစေ။
ပုဂံနပွေညျတျောမှာ မငျးယဉျနရသိင်ျခ ဘုရငျ အုပျစိုးခြိနျမှာ အိမျရှစေံ့ညီတျောကတော့ နရပတိစညျသူ ဖွဈပါတယျ။နောငျတျောဘုရငျဟာညီတျောအိမျရှမေ့ငျးရဲ့ မိဘုရားဖွဈတဲ့ ဝဠေုဝတီကို တပျမကျစှဲလနျးမိတာကွောငျ့ ညီတျောကို လိမျလညျပွီး ရှတေ့နျးစဈမကျြနှာကို စဈတိုကျဖို့ လှတျလိုကျပါတယျ …။ထုံးစံအတိုငျး ‘ ငဆောငျခမျြး ‘အရပျပေါ့ ။အဲဒီကာလတုနျးက နပွေညျတျောရဲ့စဈမကျြနှာဟာ တရုတျတှနေဲ့ပဲ ရှိခဲ့တာမို့ တရုတျတှရေဲ့ ရှတေ့နျးစဈမကျြနှာဟာ ဗနျးမျောမွို့အနီးမှာ ရှိတဲ့ ရှတေ့နျးစခနျး ငဆောငျခမျြးဖွဈခဲ့ရပါတယျ
ညီတျော နရပတိစညျသူ စဈထှကျသှားတဲ့ အခြိနျမှာ ဘုရငျ မငျးယဉျနရသိင်ျခဟာ ညီတျောရဲ့ မိဘုရားဝဠေုဝတီကို သိမျးပိုကျခဲ့ပါတယျ ။ဝဠေုဝတီဆိုတာ .. ဝါးထဲကရတဲ့သံသဒေဇ မိနျးကလေးဖွဈတာမို့ လှပခြောမောလှနျးတယျလို့ ဖတျခဲ့ရဖူးပါတယျ။
အရမျးကို ဆုတောငျးပွညျ့လှနျးလို့ မငျးညီ မငျးသားတှေ မဖူးရဟု အမိနျ့ထုတျထားရတဲ့ရုပျပှားတျောမွတျ အကွောငျး
နပွေညျတျောမှာ အကွောငျးထူးရငျ လိုကျခဲ့ဖို့ မှာထားခဲ့တဲ့ အိမျရှစေံ့ရဲ့တပညျ့ မွငျးတျောခံငပွညျ့ဟာ ခကျြခငျြးလိုကျလာခဲ့ပမေယျ့ ဗနျးမျောမွို့အနီးက ငါးပတျခြောငျးကို ရောကျတဲ့အခြိနျ ပငျပနျးလှနျးလို့စခနျးခပြွီးအိပျစကျခဲ့မိပါတယျ ။ငပတျခြောငျးရဲ့ တဖကျကမျးမှာ သူ့ရဲ့ သခငျစဈတပျကွီး စခနျးခနြခေဲ့တာကို မသိခဲ့ရှာဘူးပေါ့ ။ ဒါဟာ ကွမ်မာငငျတယျလို့ ပွောရမယျ ထငျပါရဲ့ ။
ငပွညျ့စီးတဲ့ မွငျးဟာ အိမျရှစေံ့နရပတိစညျသူရဲ့ မွငျးဖွဈတာမို့ ခြောငျးတဈဖကျကမျးက သူ့သခငျရဲ့ အနံ့ရတဲ့ မွငျးတျောကတော့တဈညလုံး ဟီနတေော့တာပေါ့ ..။အိမျရှမေ့ငျး နရပတိစညျသူဟာ သူ့မွငျးဟီသံကွောငျ့ အကွောငျးထူးပွီဆိုတာ သိပွီး တဈညလုံး အိပျလို့ မပြျောနိုငျခဲ့ပါဘူး …။ ဘယျအခြိနျရောကျလာနိုး မြှျောကိုးခဲ့ပမေယျ့မွငျးတျောခံ ငပွညျ့ကတော့ မနကျမိုးလငျးမှ ရောကျလာခဲ့ပွီး မိဖုရားကို ဘုရငျသိမျးပိုကျသှားပွီ ဖွဈကွောငျး လြှောကျတငျပါတော့တယျ ။နရပတိစညျသူရဲ့ ဒေါသဟာငယျထိပျအထိ တတျသှားခဲ့ပါတယျ ..။
ငါတို့ မငျးဟူသညျ .. တဈညတာအခြိနျဆိုတာ အကွံအားလုံး ပွီးမွောကျနိုငျကွောငျး .. ဒီလောကျအရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စကို ခကျြခငျြးလာရောကျပွီး မလြှောကျတငျရကောငျးလား ‘ လို့ အမကျြတျောရှပွီး မွငျးတျောခံငပွညျ့ကို ကှပျမကျြလိုကျပါတယျ ။ နောကျပွီး ဧရာဝတီမွဈကွောငျးအတိုငျး စုံဆငျးခဲ့ပါတယျ ။
ဧရာဝတီမွဈကမျးနဘေးမှာတညျရှိတဲ့ ဒီဘုရားစတေီကို ရောကျလာတဲ့အခါ ခဏနားလို့ ဘုရားစောငျးတနျးအတိုငျးတတျလာပွီးဆုတောငျးပွညျ့ဘုရားဆငျးတုတျောမွတျကို ဖူးမြှျောကွညျညိုပါတယျ။ပါလာတဲ့ ပုဝါဖွူကို ကပျလှူပူဇျောပွီး သစ်စာအဓိဌာနျ ပွုပါတော့တယျ ။
‘ တပညျ့တျောသညျ သစ်စာမတညျ သညျ့ နောငျတျောဘုရငျမငျးမွတျကို အပွီးတိုငျ လုပျကွံ၍ အောငျမွငျခဲ့ မညျ ဆိုပါလြှငျ ဤပုဝါစကို ဘုရားရှငျမှ ကိုယျတျောလြ၍ ခံယူတျောမူ ပါစသေတညျး။
အိမျရှစေံ့ရဲ့ ပုဝါဖွူစဟာ လမှောဝဲပြံပွီး ဘုရားရှငျထံ လှငျ့ မြောသှားခဲ့ပွီး ထူးခွားစှာ ဘုရား ရှငျရဲ့ လကျတျောပျေါကို ရောကျရှိ ခံယူတျောမူခဲ့ပါတယျ ။နရပတိစညျသူဟာ သစ်စာဓိဌာနျပွုခဲ့ရာမှာ အောငျမွငျခဲ့တာကွောငျ့ ဝမျးသာအားရစှာနဲ့ ခြီတတျလာခဲ့ပါတယျ။
သူ့ရဲ့ ငယျကြှနျတဈဦးဖွဈတဲ့အောငျစှာငယျကို တိတျတဆိတျလှတျလို့ လုပျကွံစရောမှာ အောငျမွငျခဲ့ပွီး ဘုရငျမငျးယဉျနရသိင်ျခ ကဆြုံးလို့ နရပတိစညျသူ မငျးဖွဈလာခဲ့ပါတယျ ။သစ်စာအဓိဌာနျအောငျမွငျပွီး ဆုတောငျးပွညျ့လှနျးတဲ့ ဆုတောငျးပွညျ့မွတျစှာဘုရားဆငျးတုတျောကွောငျ့ ဘုရငျနရပတိစညျသူဟာတကျ မအေးနိုငျခဲ့ပါဘူးတဲ့ ။
ဘာကွောငျ့လညျးဆိုရငျ နနျးတှငျးက မငျးညီမငျးသားတှဟောလညျးသူလိုဆုတောငျးပွီး နနျးလုမှာကိုပူပနျသောက ဖွဈခဲ့ရတယျလို့ ဖတျခဲ့ရဖူးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အမတျကွီးတှနေဲ့ တိုငျပငျတဲ့အခါမှာ အရငျဘိုးဘေးတှဖွေဈတဲ့ အနျောရထာမငျးကွီးလကျထကျမှာလညျး အခုလိုဆုတောငျးပွညျ့လှနျးတာကွောငျ့မငျးညီမငျးသားတှေ ဖူးမြှျောခှငျ့ပိတျပွီး အစောငျ့ခထြားဖူးပါကွောငျး …ပုဂံမငျးလကျထကျမှာလညျး ပွုပွငျမှမျးမံခဲ့ပွီး မွနျမာမငျးအဆကျဆကျတို့လကျထကျမှာလညျး မငျးညီမငျးသားအားလုံး ဆုမတောငျးရ၊မဖူးမြှျောရလို့ တငျးကွပျစှာ တားမွဈထားခဲ့ရတဲ့အထိ ဆုတောငျးပွညျ့လှနျးလှတဲ့ ဆုတောငျးပွညျ့ဘုရားအစဈတဈဆူ ဖွဈကွောငျး လြှောကျတငျကွပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ နရပတိစညျသူလကျထကျမှာလညျး ဒီဆုတောငျးပွညျ့ရုပျပှားတျောမွတျကွီးကို မငျးညီမငျးသားမြား မဖူးမြှျောရဆိုတဲ့ အမိနျ့တဈရပျ ခမြှတျလို့ စောငျ့ရှောကျခဲ့ရတယျလို့ မှတျသားခဲ့ရပါတယျ ။ရှတေိဂုံဘုရား အထကျပစ်စယံမှာရှိတဲ့ ပတ်တမွားမကျြရှငျ ရုပျပှားတျောလို တနျခိုးကွီးဆငျးတုတျောတှဖွေဈမယျထငျပါတယျ …။
ကြှနျတျောငယျငယျက အမနေဲ့မန်တလေးကို ဈေးဝယျလိုကျတိုငျး …ရနျကုနျမှာ ကြောငျးတတျရငျး ..ကြောငျးပိတျလို့ အိမျပွနျခြိနျ …ဧရာမွဈပွငျကို ကားနဲ့ ဖွတျတိုငျး..စဈကိုငျးတံတားကွီးပျေါကလှမျးမွငျရတဲ့ဒီဘုရားစတေီကို အဝေးကနပွေီးဖူးမြှျောကွညျညိုခဲ့ မိပါတယျ .. ။
ဒါပမေယျ့ … ဒီဘုရားစတေီအတှငျးမှာ ဒီလိုတနျခိုးကွီးတဲ့ ရုပျပှားတျောမွတျကွီး ကိနျးဝပျစံပါယျတျောမူနမှေနျး မသိခဲ့ရိုးအမှနျပါ ..။တနကေ့မှ အကွောငျးတိုကျဆိုငျလို့ဖူးခဲ့ရတာ ဖွဈပါတယျ ။ငယျငယျတုနျးက ဒီဘုရားကိုစိတျဝငျစားခဲ့တာက … အကွောငျးအရာတဈခုနဲ့ပါ ။ အဲတာကတော့ဘုရငျနရပတိစညျသူရယျ၊မှနျသူရဲကောငျး ရမနျငထှေးရယျ ၊နရပတိစညျသူနဲ့ အတိတျက ရနျကွှေးရှိခဲ့တဲ့မိခြောငျးကွီးရယျ … သုံးပှငျ့ဆိုငျဇတျလမျးလေးကို သတိယမိလို့ ဖွဈပါတယျ …။
ဒါဆိုရငျ … သမိုငျးစိတျဝငျစားသူတှအေနနေဲ့ မငျးဝံတောငျတဈဖကျကမျးမှာရှိတဲ့ ဧရာမွဈဘေးက ဘယျဘုရားစတေီလညျးဆိုတာ သိကွမယျ ထငျပါတယျ
စဈကိုငျးတောငျ တဈဖကျကမျးကရှကွေကျယကျ ရှကွေကျကဘြုရားတှဖွေဈပွီး ဒီဆုတောငျးပွညျ့ကိုယျတျောမွတျကွီးကတော့ ရှကွေကျယကျစတေီအတှငျးမှာ ရှိပါတယျ ။
မန်တလေးတိုငျး အမရပူရမွို့မှ ဆုတောငျးပွညျ့လှနျးလို့ အစောငျ့ အရှောကျနဲ့ ထားရတဲ့ ဆုတောငျး ပွညျ့ကိုယျတျောမွတျကွီး ရှိတဲ့ ရှကွေကျယကျ၊ရှကွေကျကဘြုရား မြား နဲ့ လှမျးမောဘှယျ … မွငျးတျောခံငပွညျ့ ၊ အောငျစှာငယျ တို့ရဲ့ လှမျးစတေီတှေ (ဒုတိယပိုငျး)
အခြိနျကာလဆိုတာ .. နောငျတ တရားမြားစှာကို မှေးဖှားပေးတတျ သလို သံဝဂေတရားတှကေိုလညျး ပေးစှမျးနိုငျတယျလို့ ဆိုစကား ရှိခဲ့ပါတယျ … ။နောငျတဆိုတာမြိုးက လညျး လှနျမှပဲ ရကွတာမြိုးလေ …။
နရပတိစညျသူဟာ ဘယျလိုမှ ပွု ပွငျလို့ မရနိုငျတဲ့ အမှားတှကေို မငျး ပြိုမငျးလှငျဘဝ၊အိမျရှစေံ့ဘဝမှာပဲကြူးလှနျခဲ့မိပါတယျ ။သစ်စာရှိတဲ့ ကြှနျယုံတျော ငပွညျ့ကို ဒေါသမထိမျးနိုငျပဲ မိနျးမတဈယောကျအတှကျနဲ့ အမကျြမာနျစောငျကွီးစှာ ကှပျမကျြခဲ့တယျ။ဒါတငျမကပဲ မိမိအထှတျအထိပျရောကျဖို့အတှကျ အကိုတျော မငျးယဉျနရသိင်ျခကို လုပျကွံပေးခဲ့တဲ့အောငျစှာငယျကိုလညျး နနျးရငျပွငျညီလာခံမှာ မထမေဲ့မွငျပွုသညျဆိုပွီး ကှပျမကျြခဲ့ပွနျပါတယျ … ။
ငယျကြှနျ အောငျစှာငယျကို ကှပျမကျြခဲ့တာကလညျး မိနျးမတဈ ယောကျအတှကျပါပဲ ။ ဖွဈစဉျလေးကို ပွနျစဉျးစားကွညျ့မယျဆိုရငျ …အိမျရှမေ့ငျး နရပတိစညျသူဟာ သူ့ရဲ့ မိဖုရားဝဠေုဝတီကို အကိုတျော
ဘုရငျ မငျးယဉျနရသိင်ျခက သိမျးပိုကျလိုကျတဲ့အတှကျ နာကညျြးစှာနဲ့ ကြှနျယုံ လကျရုံးတပညျ့ အောငျစှာငယျကို လုပျကွံခိုငျးတယျ။ အရေးတျောပုံ အောငျခဲ့ရငျ ဘုရငျ့မိဖုရားသုံးပါး( မရီး ၃ ယောကျ) ထဲက မငျး နှဈသကျတဲ့တဈပါးနဲ့ ငါကိုယျတိုငျလကျဆကျပေးပွီး သူကောငျးပွုမယျလို့လညျး ကတိပေးခဲ့တယျ ။
တကယျအရေးတျောပုံ အောငျမွငျတဲ့အခါမှာတော့ နရပတိစညျသူ ဟာမရီးတျောတှရေဲ့ ခသြေလုံးဖကျငိုယိုတောငျးပနျမှုကွောငျ့ သနားငဲ့ ညှာပွီး အောငျစှာငယျကိုပေးထား တဲ့ကတိဖကျြလိုကျပါတော့တယျ… ။ဟဲ့ အောငျစှာငယျ … ငါမငျးကို ခိုငျးစခေဲ့စဉျက ကတိပေးခဲ့ပမေယျ့အခုတော့ ငါ့မှာ အခကျတှနေ့ရေတယျ၊ နငျ့ကို ငါ့ရဲ့ မရီးတျောတဈပါး ပါးနဲ့ လကျဆကျပေးခငျြပမေယျ့ အဲဒီလို လုပျလိုကျရငျ ငါ့ရဲ့ ဘိုးဘေ တှကေို ပဈမှားသလို ဖွဈမှာစိုးတဲ့အ တှကျ နငျ့ကို တဈခွားအမြိုးကောငျး သမီးတဈဦးနဲ့ လကျဆကျပေးပွီး သူကောငျးပွုပေးပါ့မယျ ‘ လို ဘုရငျ ကိုယျတိုငျ ခြော့မော့ပွောဆိုခဲ့ပမေယျ့ … အောငျစှာငယျကတော့ မကွနေပျခဲ့ပါဘူး ။ ‘ကတိမတညျတဲ့ ဘုရငျပဲ . ထှီ ‘ ဆိုပွီးတံတှေးထှေးလို့ ထှကျသှားခဲ့တာကွောငျ့ နရပတိစညျသူဟာ ဒေါသဖွဈပွီး ညီလာခံ မှာ မထမေဲ့မွငျပွုတဲ့အတှကျ မငျးမကျြသငျ့လို့ ကှပျမကျြခဲ့ပါတယျ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ငပွညျ့နဲ့ အောငျစှာငယျကို ကှပျမကျြခွငျးဟာ ကြေးဇူးမဲ့လှနျးရာ ရောကျခဲ့တာမို့ နရပတိစညျသူဟာ စိတျဆငျးရဲခွငျးကွီးစှာ ဖွဈခဲ့ရပါတယျ ။ တပညျ့တှေ အတှကျ ကုသိုလျ ကောငျးမှု ပွုပေးဖို့ သူဘုရငျဖွဈခြိနျမှာ စဉျးစားဆောငျရှကျပေးခဲ့ပါ တယျ…။ အရေးတျောပုံကာလက သူအဓိဌာနျ ပွုခဲ့တဲ့ ရှကွေကျယကျ ရှကွေကျကြ ဘုရားဆီကို ရတေ
ပျ အငျအား အပွညျ့အဝနဲ့ ပွနျလာခဲ့ ပါတယျ။သက်ကရာဇျ ၅၄၇ခုနှဈ ဖွဈပါတယျ။ ဆုတောငျးပွညျ့ကိုယျတျောမွတျထံ သူဆုတောငျးခဲ့တာက သက်ကရာဇျ ၅၃၆ ခုနှဈဖွဈတာကွောငျ့ဘုရငျဖွဈပွီး ၁၁ နှဈကွာမှပွနျလညျရောကျရှိခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ ။ထီးတျောတငျဖို့နဲ့ တပညျ့တှအေတှကျ ဘုရားတညျပေးဖို့ ပွနျလာခဲ့တာပါ ။ ရှကွေကျယကျ၊ရှကွေကျကြ ဘုရားတှဟော သီရိဓမ်မာသောက မငျးကွီး တညျထားခဲ့တဲ့ ဗြာဒိတျရဘုရားတှေ ဖွဈပါတယျ။
မွတျစှာဘုရားရှငျ ကွကျမငျးဘဝက မိဖုရား ယသျောဓယာအလောငျး နဲ့အတူနထေိုငျကကျြစားခဲ့တဲ့ တောငျတျော နှဈဆူပျေါမှာ တညျထားခဲ့တာပါ ။မန်ဓာဂီရိတောငျတျောပျေါမှာ ရှကွေကျယကျဘုရားတညျခဲ့ပွီး ၊နင်ျဂါးရဈတောငျတျောပျေါမှာ
ရှကွေကျကဘြုရားတညျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ဘုရားရှငျရဲ့ သရီယဓါတျတျောတှကေို ဌာပနာပွီး တညျခဲ့တာမို့ ခုခြိနျထိ တနျခိုးကွီးလှတဲ့ ဘုရားညီနောငျအဖွဈတညျရှိနခေဲ့ပါတယျ … ။အမရပူရ မှာ တညျရှိပွီး ဧရာမွဈကမျးဘေးမှာ တညျရှိပါတယျ။
ဆုတောငျးပွညျ့လှနျးတဲ့ ဆငျးတု တျောမွတျဟာ ရှကွေကျယကျ ဘုရားအတှငျးမှာ တညျရှိပါတယျ ။အိမျရှမေ့ငျးဘဝက အဓိဌာနျပွု ဆု တောငျးခဲ့တယျဆိုတာကလညျး အရိ မဒ်ဒနာပူရ ပုဂံနပွေညျတျောမှာ မငျးဧကရာဇျဖွဈမညျဆိုပါက ဤပုဝါစကို ဘုရားရှငျမှ ကိုယျတျောလြ၍ ခံယူတျောမူပါစသေတညျးလို့ ဆုတောငျးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။အကိုမငျးယဉျနရသိင်ျခကို သတျဖို့ဆုတောငျးတာမဟုတျပါဘူး ။ပထမအပိုငျးမှာ စာရေးတာ လိုအပျခကျြရှိသှားတဲ့အတှကျ လူသတျဖို့ ဘုရားက ခှငျ့ပွုသလို ဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။ )တပညျ့တှအေပျေါ တငျရှိခဲ့တဲ့နောငျတ တရားတှနေဲ့အတူ ရှကွေကျယကျ ရှကွေကျကြ ဘုရားနှဈဆူကို ပွုပွငျပွီး ထီးတျောအသဈတငျလှူဖို့ လာခဲ့တဲ့ နရပတိစညျသူရဲ့ ဖောငျတျောဟာ ရှကွေကျကဘြုရားရောကျခါနီးမှာပဲ အတိတျဘဝက ရနျငွိုးရှိခဲ့တဲ့မိခြောငျးကွီး ရဲ့ တိုကျခိုကျမှုခံရပါတော့တယျ ။နတျမိခြောငျးကွီးဟာ နရပတိစညျသူရဲ့ ဖောငျတျောကို အောကျကနထေမျးထားတဲ့အတှကျ ဖောငျတျောရပျသှားပွီး တဈဖကျစောငျးသှားခဲ့ပါတယျ ။ ဖောငျတျောတိမျးမှောကျတော့မယျ့ အခွအေနမှော ဖောငျတျောပျေါမှာ ပါလာတဲ့ မှနျသူရဲကောငျး ရမနျငထှေးဟာ ဘုရငျ့သံလကျြတျောကို တောငျးလို့ ရအေောကျမှာ မိခြောငျးကွီးနဲ့ သတျပုတျလို့ အနိုငျယူခဲ့ပါတယျ။ မငျးကွီးလညျး မှနျသူရဲကောငျး ရမနျငထှေးကို အားရကွနေပျတျောမူလို့ ဆုတျောမြားစှာပေးတဲ့ အပွငျ အနန်တသူရိယဘှဲ့ ခြီးမွှငျ့ခဲ့တယျလို့ မှတျသားခဲ့ရဖူးပါတယျ။ငယျငယျတုနျးက စဈကိုငျးတံတားကွီးပျေါက ဖွတျပွီး ရှကွေကျကဘြုရားကို အဝေးကဖူးမြှျောကွညျညိုမိတိုငျး ရမနျငထှေးကို အားကစြိတျနဲ့ သတိယမိပါတယျ ။
နရပတိစညျသူဟာ ရှကွေကျယကျ ရှကွေကျကြ ဘုရားနှဈဆူကိုပွုပွငျပွီး ထီးတျောအသဈတငျလှူခဲ့ပါတယျ ။ရှကွေကျယကျဘုရားရဲ့အောကျအဆငျ့ရငျပွငျတျောပျေါမှာတဝဂူ ကွာခံဘုရားတဈဆူ တညျထားခဲ့သလို မွငျးတျောခံငပွညျ့အတှကျ ဘုရားတဈဆူ ၊ အောငျစှာငယျအတှကျဘုရားတဈဆူ တညျပွီးကုသိုလျပွုလို့ အမြှပေးဝခေဲ့ပါတယျ …။( ဘုရားပုံတဈခုခငျြးစီမှာ စာရေးပေးထားပါတယျ)ရှကွေကျယကျဘုရားခွရေငျးမှာ မွငျးတျောခံငပွညျ့အတှကျ နတျနနျးတဈခုကိုလညျး တညျဆောကျပေးခဲ့ပါတယျ လကျရှိမှာလညျး နတျနနျးဟာ မူလအတိုငျးတညျရှိနပေါသေးတယျ။
ဘုရားတှေ ထီးတငျပှဲမှာ နရပတိစညျသူဟာ သူ့ငယျကြှနျအရငျးတှကေို သတိယ တမျးတလှနျးလို့ မအိပျမစား ဖွဈခဲ့တယျဆိုတာရယျ …ဒီအခြိနျမှာ သူ့ငယျကြှနျတှရှေိရငျအရမျးဂုဏျယူ ဝမျးမွောကျကွပလေိမျ့မယျလို့ တဖှဖှ ပွောဆိုခဲ့တယျလို့ ဖတျမှတျခဲ့ရပါတယျ။ တခါတရံမှာ သတိထားရမှာက ဆရာ တပညျ့ သိပျရငျးနှီးတဲ့အခါ တပညျ့ဆိုတာဆရာအရငျးကို စိတျကောကျတာနှဲ့ဆိုး ဆိုးတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ ဒါကို နားလညျမှု မပေးရငျ ဆရာကို မခနျ့လေးစားလုပျတယျလို့ နားလညျမှုတှေ လှဲမှားတတျကွပါတယျ ဘဝနဲ့ရငျးရတဲ့ ဆငျခွငျစရာတှကေိုသမိုငျးတှကေ လကျဆငျ့ကမျး ပေးထားခဲ့ပါပွီ … ။မွငျးတျောခံငပွညျ့ကို ကှပျမကျြခဲ့စဉျတုနျးအခါကလညျး … စိတျမကောငျးစရာ အဖွဈအပကျြကလေးတဈခု ဖွဈခဲ့ပါတယျ… ။
နရပတိစညျသူရဲ့ ဖောငျတျောဟာဧရာဝတီမွဈကွောငျးအတိုငျးစုနျဆငျးလာရငျး စဈကိုငျးရှာသဈကွီးနဲ့ငါနျးဇှနျအနား ရောကျတဲ့အခါ ဖောငျတျော ရပျသှားခဲ့ပါတယျ ။ မွငျးတျောခံငပွညျ့ရဲ့အလောငျးဟာဖောငျတျောနဲ့ ကပျပါလာတာကိုထူးဆနျးစှာ တှရှေိလိုကျရတယျလို့ ဖတျခဲ့ရဖူးပါတယျ … ။နရပတိစညျသူဟာ စိတျမကောငျး ကွီးစှာ ဖွဈခဲ့ရပွီး ‘ မငျးတာဝနျကွပေါတယျ ၊နရေဈပါတော့ ငပွညျ့ရယျ’လို့ ပွောဆိုလို့အနီးက သဲသောငျပွငျမှာ ဖောငျတျောကပျလို့ ကောငျးစှာမီးသဂွိုလျပေးခဲ့ပါတယျ ။သူ့တပညျ့ကို ခြီးမွှောကျတဲ့ အနနေဲ့သဲသောငျပွငျကို အပိုငျစား ပေးခဲ့ပါတယျ။ ရှပွေညျ့ရှငျ ကြှနျးပိုငျနတျဖွဈသှားခဲ့တယျလို့ ဖတျခဲ့ရပွီးဒသေခံမြား ကိုးကှယျလကျြရှိကွောငျး သိရှိရပါတယျ ။သမိုငျးဆိုတာ သဆေုံးပြောကျကှယျသှားတဲ့ လူတှေ… မွို့ရှာတှအေကွောငျး သငျကွားလလေ့ာရတဲ့ဘာသာရပျဖွဈသလို လူတှေ ဒသေတှေ တိမျကောပပြောကျသှားကွပမေယျ့ မပပြောကျတဲ့ အကြိုးဆကျတှကွေောငျ့ ယခုလူ့ဘောငျလောကကွီးဆကျလကျ ရှငျသနျနခေဲ့ရတာဖွဈပါတယျလို့ သမိုငျးဆရာမကွီးရဲ့စကားလေးကို သဘောကမြိပါတယျ ။အတိတျမရှိခဲ့ရငျ ပစ်စုပ်ပနျဆိုတာမရှိနိုငျသလို ပစ်စုပ်ပနျမရှိရငျ အနာဂတျလညျး ရှိမှာမဟုတျပါဘူး။အတိတျကို သင်ျခနျးစာယူနိုငျပွီး အနာဂတျ လှပအောငျဖနျတညျးဖျောဆောငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆန်ဒပွုလိုကျပါရစေ ။ စာဖတျသူမြား အားလုံးဒေါသ မာနျမာနကွောငျ့ ရတဲ့ နောငျတ တရားတှေ ကငျးဝေးကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ ။
“အပြာကားများ ကြည့်ခြင်းသည် အမျိုးသားများ၏ ဦးနှောက်ကို ပျက်စီးစေနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိ”
“ဆနျတှေ ဝယျထားတာ ကွာလာလို့ မညျးလာပွီး ပိုးထိုးလာလြှငျ”